Nokia 2.3 wali ma imaan, wuxuuna ku imaan doonaa sedex midab oo kala duwan | Androidsis
Wax walba waxay umuuqdaan inay muujinayaan in HMD Global ay diyaarinayso taleefan casri ah oo cusub oo ka kooban taxanaha Nokia 2. Nokia 2.3, in si gaar ah loo caddeeyo.
Sida ku cad macluumaadka cusub ee la helay, qalabkan ayaa la soo saaray Iyo, sida xaqiiqda ah in lagu xisaabtamo, waxaa lagu bixin doonaa saddex nooc oo midabbo kala duwan ah.
Sida lagu sheegay qoraal uu soo saaray NokiaPowerUser, Waxaa soo ifbaxay xog ururin ka ganacsade Nokia 2.3 ayaa imanaya. Macluumaadka qeybiyaha ayaa sidoo kale ahaa isha Nokia 7.2 ka daatay kahor intaan la bilaabin, taas oo kalsooni siinaysa warbixintan cusub ee cagaha na saareysa.
Nokia 2.3 ayaa xaday
Diiwaanka keydka xogta waxay muujineysaa in nambarka nambarka Nokia 2.3 uu yahay TA-1206 waxayna leedahay laba taageero SIM. Waxay kaloo sheegaysaa taas taleefanku wuxuu ku imaan doonaa Sand, Cyan Green iyo noocyada midabka Dhuxusha.
El Nokia 2.2 waa terminaal waxqabadkiisu hooseeyo oo la bilaabay bishii Juun ee sanadkan oo ah mid ka mid ah xulashooyinka ugu raqiisan HMD Global. Tan waxaa lagu gartaa iyadoo la siinayo qiimo wanaagsan lacag, waana sababta ay ugu helayso sumcad aad u wanaagsan suuqyada soo baxaya, in ka badan kuwa kale.
Nokia 2.3 ayaa la filayaa inuu noqdo taleefan casri ah oo la socda isla qorshaha ay soo jeediyeen moobilka kor ku xusan iyo kuwii ka horreeyayba. Sidaa darteed, waxay noqon laheyd horumar yar oo tan ah, oo sii wadaya inuu nagaga tago terminal leh sifooyin dhexdhexaad ah iyo tilmaamo farsamo; taasi waa waxa aan filayno.
Ogsoonow in Nokia 2.2 uu la socdo shaashad 5.71-inch IPS LCD ah oo leh HD + xallinta 1,520 x 1,080 pixels iyo buundo, processor Mediatek Helio A22, 2/3 GB RAM, 16/32 GB oo xusuusta gudaha ah, 3,000 batari awood mAh, kamarad gadaal ah 13 MP iyo 5 MP toogashada hore. Tan waxaan uga maleyn karnaa astaamaha dhaxalkiisa.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Noticias » Nokia 2.3 ayaa imanaya, wuxuuna ku imaan doonaa sedex nooc oo midabbo kala duwan leh
Khariidadaha Google ayaa kaa caawin doona inaad ka hesho meelaha xiisaha leh ee magaalooyinka